Wasirka Britain uqaabilsan Afrika Henry Bellingham oo boqonaya Hargeysa – SBC
Wasirka Britain uqaabilsan Afrika Henry Bellingham oo boqonaya Hargeysa
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska dawlada Britain u qaabilsan Soomaaliya oo SBC la soo gaarsiiyey ayaa lagu sheegay in wasiirka Britain u qaabilsan Afrika Henry Bellingham uu maanta sodcaal ku tagayo magaalada Hargeysa, warsaxaafadeedkaasi ayaa u qornaa sidan.
Wasiirka Britain uqaabilsan Afrika aya manta booqonaya Hargeysa. Booqashadiisa waa tii ugaa horeysay oo Wasiir ka tirsan xafiiska ummuraha dibadaa ee Britain uu ku tago Soomaliya in kabadan 3 sano taasi oo dabasocooo boqoshadii xoghayaha horumarinta caalamka Andrew Mithcell oo kutagay Haregysa bishii febrayo .
Mar uu hadlayay Bellingham aya wuxuu yiri
” Soomaliya muhiim ayay utahay UK . Waxaan hormud unahanay sidii bishi caalamka logu dhiri galiinlahaa inay wax ka qaabato dhibatada binnaadinimu ee tagan. Inta aan safarkan kujiiro waxaan filayaa in ay arko aqaabadaha saamaynaya sida aan u noqoon laheyn wadeeygaa bar-barayo xasiloonidaa Soomaliya iyo horumarka si logu hortago dhibatdaa binaadinimu. Taas oo dhici kartaa oo kaliya markaa Somaaalida ,kuwa gudaha iyo dibiidaa jooga oo ay ka mid tahay UK ay ku miidowaan in ay tageeyran nabaad raadin iyo xal siyaasadeyd oo wara,”
Source: Xafiiska British-ka ee Soomaaliya